Soloky ny ravina ho an'ny ankizy "goji" - Moi Mili
Home > Ravina ravina ho an'ny ankizy "goji"
Ny tsipika ravina voalohany avy amin'i Moi Mili no fanampiny tsara amin'ny kanopy. Miasa tsara amin'ny hazakazaka any amin'ny efitranon'ny ankizy. Ny landihazo sy ny landihazo voajanahary dia fifangaroana lehibe. Ny tsihy dia marihina mafy ary misy lafiny roa. Ny loko volom-boasary marevaka mametaka amin'ny efitrano voaravaka amin'ny hazavana voajanahary mafana. Misaotra azy ity, ny hilalao amin'ny tany dia hahazo aina sy mahafinaritra.
Ny lambam-bolo malefaka ho an'ny ankizy dia manampy tsara amin'ny teepee, afaka ampiasaina ao amin'ny efitrano, zaridaina na amin'ny fitsangantsanganana iray izy ireo. Mety amin'ny karazan-dalao rehetra, hatramin'ny fahazazany.
Lamba: 100% Cotton sy 100% Kambana amin'ny fanamarinana OEKO-TEX®.
Habe 135x 125 cm, hatevina 3 cm.